Iwo akanakisa partition mamaneja eLinux | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unenge watoziva kare kuti kune mapurogiramu mazhinji achatibatsira gadzirisa edu ma disk zvikamu muLinux, asi kazhinji huwandu hwakawanda kwazvo hwesarudzo inova dambudziko kune mutsva mucherechedzo uye zvinoita kuti vasave nechokwadi kuti ndeipi yavanofanira kusarudza. Sezvo ini ndichigara ndichitaura, hapana chinzvimbo cheakanakisa kana chakanyanya maturusi ekuparadzanisa, asi iwe ungafarire mamwe kupfuura mamwe, asi iwo ese ane zvazvakanakira nekuipira, saka sarudza iyo inonyatsokodzera iwe kana iyo yaunosarudza. chinja zvirinani. Nekudaro, pano tinonyora zvimwe zvezvakanakisa zvaunogona kuongorora ...
Iwe unofanirwa kuziva kuti kudzora rakaomarara dhisiki partitions iri tsika 'ine njodzi huru' nekuti kana iwe usingazive chaizvo zvaurikuita, unogona kusiya system isina basa kana iwe unogona kurongedza yakawanda yakawanda yakakosha yeruzivo iyo yausingade kurasikirwa nayo sitiroko. Naizvozvo, iwe unofanirwa kushandisa zvirongwa izvi kana iwe uchiziva zvauri kuita, kunyanya iwo wekuraira iwo iwo mutsara, ayo anowanzo kuve akaomesesa kune vanotanga. Kana iwe uri wekutanga, ndinokurudzira kuti utange ne graphical sarudzo yemidziyo yatinayo uye kanganwa nezve iyo yekuraira mutsara iwo.
Nekudaro, apa isu tichaenda kukupa iwe mbiri ye akanakisa kuraira mutsara maturusi iyo iwe yaunogona kushandisa kugadzirisa ako partitions uye akaomarara dhiraivha:
fdisk: icho chine simba kuraira turu chishandiso ine zvinyorwa zvinyorwa nzira iyo iwe yaunogona kubata yako zvikamu. Rubatsiro rwavo runoita kuti zvive nyore kushanda, asi izvo hazvireve kuti zviri nyore kune mumwe munhu ane ruzivo shoma. Mirairo yega yega mumenyu yayo yekudyidzana inogona kukumbirwa netsamba imwe, senge m yekubatsira, n yekugadzira zvikamu zvitsva, p yekunyora tafura yekuparadzanisa, t yekumisikidza, w yekunyora chikamu, zvichingodaro.
akaparadzaniswa: ndechimwe chishandiso mune zvinyorwa zvemavara zvine musiyano mukuru kubva kune yapfuura ndeyekuti zviito zvese zvemirairo yakatumirwa zvichaiswa ipapo ipapo. Naizvozvo iwe unofanirwa kuibata zvakanyatso chenjera kupfuura yapfuura ...
Uye kune rimwe divi matatu ezvinyanya kukosha maererano ne zvishandiso neGUI:
GParted: Ini ndinofunga ndiyo yakanyanya kukurudzirwa pamhando dzese dzevashandisi nekuti graphical interface iri nyore uye inonzwisisika uye inobvumira akawanda mashandiro kuti aitwe pane system partitions. Kubva pakumutsiridzwa, gadzira nyowani, fomati, gadzira tafura dzekuparadzanisa, shandura, etc.
GNOME: inounza yega dhisiki chishandiso chakaiswa nekumisikidza, chimiro chayo chiri nyore asi kutendeseka, kana iwe uchida kuita chimwe chinhu kupfuura zvinokwanisika zveichi chishandiso, ini ndinokurudzira GParted.
KDE: Zvingaitwe sei neimwe nzira, KDE yakave yakapa nharaunda dzayo dzePlasma desktop neimwe yekuparadzanisa chishandiso nekutadza. Mune ino kesi, iyo interface inoita senge yakafanana neGParted uye iri nyore, saka inogona kuve imwe sarudzo yakanaka. Kana zviri izvo mikana yazvinopa, zvakatonyanya kana kushoma zvakafanana nezvakaitika zvakapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Iwo akanakisa partition mamaneja eLinux